DEG DEG: Man United Oo Si Rasmi Ah U Soo Bandhigtay Maaliyadeeda Cusub Ee Xilli Ciyaareedkan & Shirkad Cusub Oo Ay Ku Xayaysiinayaan (Daawo Sawiro) - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG DEG: Man United Oo Si Rasmi Ah U Soo Bandhigtay Maaliyadeeda Cusub Ee Xilli Ciyaareedkan & Shirkad Cusub Oo Ay Ku Xayaysiinayaan (Daawo Sawiro)
DEG DEG: Man United Oo Si Rasmi Ah U Soo Bandhigtay Maaliyadeeda Cusub Ee Xilli Ciyaareedkan & Shirkad Cusub Oo Ay Ku Xayaysiinayaan (Daawo Sawiro)
July 15, 2021 Saed Mohamed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Maaliyada cusub ee Manchester United ay ku ciyaareyso xilli ciyaareedkan 2021/22 ayaa si rasmi ah loo soo shaaciyay maanta.
United ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay maaliyadeeda cusub ee kulamada gurigooda ee xilli ciyaareedka soo socda iyagoo ku ciyaari doona kulankooda ugu horeeya ee saaxiibtinimo.
Maaliyada cusub oo ay soo saartay shirkada Adidas ayaa ah mid lagu maamuusayo maaliyadihii hore ee taariikhiga ahaa iyadoo ka kooban midabka ay Man United caanka ku tahay ee casaanka iyo midabka cadaanka ah oo lagu hardhay.
Qoorta maaliyada ayaa ah wareeg cad si la mid ah gacmaha maaliyada ayaa loo yeelay wareeg cad iyadoo Manchester United ay xilli ciyaareedkan ay maaliyadooda ku xayaysiinayaan shirkada TeamViewer madaama uu dhacay qandaraaskii ay kula jireen shirkada gawaarida ee Chervolet.
Ereyada “dhalinyaro, dhiiranaan iyo guul” ayaa sidoo kale lagu qoray gudaha qoorta maaliyada.
Xiddigaha soo bandhigay maaliyada cusub waxaa ka mid ah Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford iyo Luke Shaw.
Dhanka kale, Jadon Sancho oo tagay xarunta tababarka Man United uu tijaabada caafimaadka ku maray Talaadadii ayaa isna la sheegay in lagu sawiray maaliyada cusub laakiin sawiradiisa lama baahinin madaama aan weli heshiiska la dhameystirin.
Xiddiga Ingariiska ayaa galaya fasax seddex isbuuc ah madaama uu ka qeybgalay ciyaarihii Qaramada Yurub, wuxuuna kulankiisa ugu horeeya ee Man United uu ku dheeli doonaa Old Trafford 7da bisha Agoosto kulanka ay ku soo xirayaan kulamadooda saaxiibtinimo ee ay la balansan yihiin Everton.